Wararka Maanta: Talaado, Apr 9 , 2013-Xukuumadda Somalia oo weydiisatay Dowladda Liibiya in Xabsiyada dalkeeda ay kasii dayso Soomaalida ku xir-xiran
Danjire Daahir Siciid ayaa uga sheekeeyay wasiir ku-xigeenka xaaladda nololeed ee maxabiista Soomaalida ah ee ku jira xabsiyada Liibiya, isagoo u sheegay inay isugu jiraan eedeysanayaal loo heysto fal dambiyeedyo kala duwan, kuwa u xiran arrimo siyaasadeed iyo kuwa si sharci-darro ah dalkaas ku galay.
“Liibiya waxay qorsheynaysaa inay casuumo wafdi ballaaran oo dowladda Soomaaliya ka socda si ay kormeerro ugu sameeyaan maxaabiista ku jira xabsiyada kala duwan ee Liibiya,” ayuu yiri dajire Daahir oo hadalkiisa ku daray inay ilaaliyaan xuquuqda maxaabiista gacanta ugu jira.
Dr. Barroow oo isaguna hadlay ayaa muujiyay sida dowladda Soomaaliya ay uga go’an tahay raadinta xaqqa iyo ilaalinta sumcadda muwaadiniinteeda ku kala firirsan caalamka, isagoo ka codsaday dowladda Liibiya inay sii-dayso maxaabiista Soomaliyeed ee dalkeeda ku xabisan.
Tallaabadan ayaa daba-socota kulan madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh iyo ra’iisul wasaaraha Liibya, Cali Zeydaani ku dhexmaray magaalada Doha ee dalka Qatar, kaasoo uu madaxweynuhu ku codsaday Liibiya inay dhowrto maxaabiista Soomaalida ah eek u jira xabsiyadfa dalkeeda, ayna sii dayso; dibna ugu soo celiso Soomaaliya.
Dalka Liibiya oo ka mid ah dalalka ku yaalla Waqooyiga Afrika ayaa wuxuu muddo sannado ah marin u ahaa tabriibayaasha Soomaalida ah ee doonaya inay galaan dalalka Yurub, waxaana badda u dhexeysa labadaas dal ku dhintay kumannaan Soomaali ah, halka xabsiyada dalkaasna ay ku jiraan boqolaal kale oo Soomaali ah.
Maxaabiista qaarkood oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhibaato loogu geysto xabsiyada ay ku jiraan, waxaana maxaabiistan ay isugu jiraan rag iyo dumar dhallinyaro ah oo markii hore dalkaas u tagay inay si tahriib ahaan ah ay uga baxaan.